၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုရွေးချယ်နိုင်ရေး ဖတ်ရှုစိစစ်ရမည့် စာအုပ်များ လက်ခံလျက်ရှိရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၁၇) ရက် တွင် စာအုပ် (၂၂၉) အုပ် ထပ်မံရရှိ
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရေး ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း ပထမအကြိမ်ထုတ် စာအုပ်များကို စာပေဆုများ အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကော်မတီရုံး စာပေဗိမာန်သို့ ပေးပို့ကြရန် စာရေးသူ၊ ပုံနှိပ်သူနှင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသူများနှင့် ပြည်သူများကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၊ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာနများမှတစ်ဆင့် မေတ္တာရပ်ခံ နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပထမအကြိမ်ထုတ် စာအုပ်များကို တစ်မျိုးလျှင် (၂) အုပ်နှုန်းဖြင့် စာပေဗိမာန်ရုံးက လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ www.moi.gov.mm/ppd Web Site တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ရရှိလာသည့် စာအုပ်များကို အမျိုးသားစာပေဆု ရွေးချယ်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဘာသာရပ် (၁၆) မျိုးအလိုက် ဘာသာရပ်များ ခွဲခြားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၁၇) ရက်တွင် စာအုပ် (၂၂၉) အုပ် ထပ်မံရရှိခဲ့ ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များ စာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း စုစည်းဖော်ပြ အပ်ပါသည်-
(၁) လောကရှုခင်း ပြတင်းတံခါးအဖွင့် - အယ်နီဝင်း၊ (၂) ရာဇဝင်ထဲကဖျာပုံ ဖျာပုံထဲက သမိုင်း - ဖိုးအောင်လေး၊ (၃) နှလုံးသားထဲက မြစ်ခြေ - ကျော်လင်း၊ (၄) ကျွန်တော်လည်း နဂါးဖြစ်သွားပါတယ် နှင့် အွန်လိုင်းဆောင်းပါးများ - ဒေါက်တာခင်မောင်ညို၊ (၅) ယုန်ကလေး နှာစေးနေသည် - ခင်မာလာကြာဖြူ၊ (၆) ဘာသာခြား လူနည်းစု … ဆက်ဆံရေးအမြင် - မိုးသု (မန္တလေး)၊ (၇) ကဗျာဆရာများနှင့် စကားပြောခြင်း - လေးကိုတင်၊ (၈) စာတွေ့လက်တွေ့နှင့် ကိုယ်တွေ့သင်ခန်းစာ များ - အောင်ကျော်စိုး၊ (၉) နွေဦးဘူတာကဗျာနှင့် အက်ဆေးများ - နွေသစ်ငြိမ်း၊ (၁၀) ပန်းတွေပွင့်ဖို့ စောင့်ရချိန် - ပုညခင်၊ (၁၁) ပထမကမ္ဘာစစ် မှတ်တမ်း - သန်းဝင်းလှိုင်၊ (၁၂) ကမ္ဘာပါဝါအရွေ့ မြန်မာအနေအထား - ဇော်ဇော်အောင် (မန္တလေး)၊ (၁၃) ကိန်းဂဏန်းတစ်လုံးနဲ့ ကမ္ဘာပျက်တော့မှာလား …. ဆောင်းပါးများ - ဆရာဝန်လေးတင်၊ (၁၄) စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာကြည့်ကြည့်မယ် - မော်သာထွေး (မန္တလေး)၊ (၁၅) ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက် … စာစု - ဆရာဝန်လေးတင်၊ (၁၆) ငါးဘုရင်မရဲ့လက်ဆောင်နှင့် အခြားပုံပြင်များ - မောင်ခေတ်ထွန်း၊ (၁၇) သတိပြုဖွယ် ဓမ္မစာစု - အရှင်ကေသရ၊ (၁၈) သွားပါများ ခရီးရောက် - မောင်သန်းဆွေ၊ (၁၉) ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်း၏ အခြေခံသဘောတရားများ - ဆရာဆန်ကျဲဦးလွယ်၊ (၂၀) လီနင်ဝါဒ အခြေခံများ - မောင်မောင်တင်၊ (၂၁) ဒါဒါလေးနှင့် မှော်ဝင်လောက - စွဲညို့၊ (၂၂) ညီ - ဆုခြည်ကို၊ (၂၃) လူအများဆိုင်ရာ တစ်ကိုယ်ရေကျင့်ထုံး ၁၀၀ - ဒိုဂျေဆန်း၊ (၂၄) စစ်အမှောင်ခေတ်က ဟာသများ - ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေး၊ (၂၅) အနီရောင်နန်းက အိပ်မက်ပုံပြင် - အင်ကြင်သဇင်၊ (၂၆) Lucifers bride god child existence - Anna lynn၊ (၂၇) အို … အင်း၀အက်ဆေးအချို့နှင့် ဆောင်းပါးအနည်းငယ် - မိုးကျော်ဇင်၊ (၂၈) တစ်နေရာရာမှာ နေသာဆဲ - ဟိန်းလတ်၊ (၂၉) ဗုဒ္ဓခေတ် ထင်ရှားသော နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်များ - အရှင်အာဒိစ္စဝံသ၊ (၃၀) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး - သူရိန်မျိုးမြင့်၊ (၃၁) မေမောင်များများ ၀တ္ထုတိုစုစည်းမှု - မေမောင်၊ (၃၂) မိုးရေစက်လက် စိမ်းရက်ပါတဲ့ မောင်လိပ်ပြာ ၀တ္ထုလတ် စုစည်းမှု - ညိုနှင်းအိမ်၊ (၃၃) ပညာရေးကြောက်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခြင်း - ဦးမျိုး(မကွေး)၊ (၃၄) အိုဘယ့် ပြည်မြန်မာ ဘ၀ထဲကဟာသများနှင့်ဓမ္မရသစာစု - ကညင်ပိုး(တာချီလိတ်)၊ (၃၅) ဦးနေဝင်းအား သိက္ခာရှိစွာ ထွက်ပေါက်ပေးခဲ့ကြသူများ - အောင်စွမ်း၊ (၃၆) လူရည်သန့် ကဗျာ ၁၆ ပုဒ် - မင်းသက်ဇဉ်၊ (၃၇) မန္တလေး - မောင်နိုင်လင်း(ကောလင်း)၊ (၃၈) ဘာမထီ မဟာအာဇာနည် သာကီမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ - ဦးလှသိန်းထွဋ်၊ (၃၉) ဘ၀ကိုမဟာဗျူဟာမြောက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဘ၀နှင့်အောင် မြင်ရေး- ၂ - ဒေါက်တာအေးကျော်၊ (၄၀) မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ရွှေရတုသမိုင်းဝင်များ - အေးကြူလေး၊ (၄၁) နွေဦးနှင့် နှင်းခဲပန်း - ဒဂုန်တာရာ၊ (၄၂) ခေတ်ကြေးမုံပြင်ဝယ် နှစ်ခြောက်ဆယ် - တက္ကသိုလ်မြတ်သူ၊ (၄၃) Facebook ပေါ်မှ ရသစာစုလေးများ - ကိုကင်း၊ (၄၄) မြန်မာ(ရခိုင်) ဂုဏ်ဆောင် … ထေရုပ္ပတ္တိ - ဦးအောင်ဌေးဦး(မြောက်ဦး)၊ (၄၅) ခေတ်သစ်ဇီ၀က ကုထုံးနှင့်ပျောက်စေဆရာ အပိုင်း- ၂ - ၀ဏ္ဏမာလာ၊ (၄၆) ဆွန်ဇု၏စစ်အနုပညာကိုချဉ်းကပ်ခြင်း - အိမ်ကြီးမောင်၊ (၄၇) ကြွေးမြီကင်းသော ဘ၀နေမှု - ဒေါက်တာသာထွန်းဦး၊ (၄၈) ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာအကောင်းစား၏ ဘ၀စာမျက်နှာများ - တင်အောင်မြင့်၊ (၄၉) မဟာပလ္လင် - သျှင်မ၊ (၅၀) သင့်အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်မှုများ - အောင်လှိုင်၊ (၅၁) မြန်မာ့နှလုံးသား - ကဲဆုသာ၊ (၅၂) ပြည်သူ့ဒေဝီနှင့် အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ - ရဲမြလွင်၊ (၅၃) A STUDY OF THE----MYANMAR MONARCHS - KYAW KYAW HLAING၊ (၅၄) ကလေးကိုချစ်ရင် မခြောက်ပါနဲ့ - ဒေါက်တာသိန်းလွင်၊ (၅၅) ကျောင်းနှင့်ဘ၀ ဆက်စပ်ပြင်ဆင်ကြ - ဒေါက်တာသိန်းလွင်၊ (၅၆) သစ်ကုလားအုတ် ငှက်ကြီးဝန်ပိုနှင့်ကျွန်တော် - လင်းတည်ဦး၊ (၅၇) မှော်လက်ညှိုးနှင့်ငှက်ပစ်သူများ - လင်းတည်ဦး၊ (၅၈) ကလေးတွေကျောင်းမှာ အောင်မြင်ဖို့နည်းလမ်းများ - ဒေါက်တာသိန်းလွင်၊ (၅၉) အိုရှိုး အပြည့်အ၀ဆုံးလမ်းစဉ်တော် - အောင်သူရ၊ (၆၀) အနာဂတ်ရဲ့ ကြယ်စင်သစ် ကလေးကဗျာများစုစည်းမှု - ဖျာပုံရည်လွင်အောင်နှင့် ထွေးထွေး၊ (၆၁) ကျန်းမာပါစေ ကမ္ဘာမြေ အပိုင်း - ၄ - ဒေါ်အေးအေးဦး၊ (၆၂) လိုရင်းရောက်ဖို့ စက္ကန့် ၃၀ - ကောင်းသာ၊ (၆၃) ရွှေရောင်ဥပဒေသဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် - ကောင်းသာ၊ (၆၄) ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာနှင့် မဟာပါရမီဖြည့်ဖက် - မောင်ရင့်ကျူး(မြောင်းမြ)၊ (၆၅) Goodbye America - ရွှေကူမေနှင်း၊ (၆၆) ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ကျွန်တော့်အကြောင်း နှလုံးသားရသ စာစုများ - ကိုမြင့်လွင်၊ (၆၇) သက်တံရောင်လွှမ်း ဥယျာဉ်နန်းကလေးကဗျာများ - ကျော်လှိုင်သစ်၊ (၆၈) Second call - ဆန်းကျော်စွာဝင်း၊ (၆၉) တပ်ချုပ်ကြီးနှင့်အတူတွဲ … ဝမ်းနားဟွေ၊ မိုင်းနင်တိုက်ပွဲ - ယုံလေး(ဗိုလ်ကြီးဝင်းကို-ငြိမ်း)၊ (၇၀) ဆရာဝန်တွေ တကယ်မေတ္တာမဲ့နေကြပြီလား - အေးကမ္ဘာဒေါက်တာချစ်၊ (၇၁) Facebook ပေါ်မှ ကျွန်တော်၏ ကဗျာများ - ၁ - ကဗျာအို (ထောက်ကြန့်)၊ (၇၂) ထွက်ပြေးချင်သူ - တင်တင်ဦး၊ (၇၃) ပညာရေးသုတေသန - ညီညီဖေ၊ (၇၄) အက်ကွဲကြောင်းပေါ်က ဒဏ်ရာတွေ … စာစုများ - သားသခင် (မကွေး)၊ (၇၅) ငှက်တို့ရဲ့ ပွင့်လင်းဂီတပွဲတော်နှင့်အခြားကလေးကဗျာများ - မောင်သာလင်း၊ (၇၆) လပွတ္တာဟုခေါ်ပါသည် - မောင်ကောင်းမြင့်၊ (၇၇) အနားသတ်မျဉ်းများအား ကျော်လွန်၍ - ရှင်သန့်လွင်(ရုက္ခဗေဒ)၊ (၇၈) တက္ကသိုလ် ပညာပဒေသာစာစောင် စာပေဆောင်းပါးများ (၆၆-၈၄) - ဒေါ်နီလာချစ်ဆိုင်၊ (၇၉) မြဘယက်နှင့်၀တ္ထုညွန့်ပေါင်းချုပ် - ၃ - ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ (၈၀) ယိုးဒယား-မြန်မာ စစ်သမိုင်း - ပန်းတနော်ခင်မောင်မြင့်၊ (၈၁) ဒဿန၏ အရသာ - ၂ - လှိုင်သင်း၊ (၈၂) ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် မျိုးရိုးဇာတိမာန် - သုတေသီမောင်မောင်၊ (၈၃) သံသရာတစ်ကွေ့ - ဦးဝင်းထိန်၊ (၈၄) ညီလေးတို့ဖတ်ဖို့ - ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ၊ (၈၅) ၁၂ လ ၁၂ ပွဲ အခင်းအကျင်း - ကေသီရိ(တောင်ငူ)၊ (၈၆) နိဗ္ဗာန်လမ်း - ဒေါက်တာအရှင်အာစာရ၊ (၈၇) တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ (၁၉၈၂) - လှမြင့်၊ (၈၈) အိုင် ကျွန်ုပ်နှင့်မြိုင်အရှုပ် - ဂျက်(ကွမ်းခြံကုန်း)၊ (၈၉) မေလန်ဖန်းနှင့် အောင်ဗလ - မောင်ဝင်းဝါ၊ (၉၀) ပြောင်းလဲတိုးတက်သော စီမံခန့်ခွဲဦးဆောင်မှု - ဇင်ဖြိုးပိုင်၊ (၉၁) အလေးထားစရာ မြန်မာစာ - ၄ - အေးကျော်မင်း၊ (၉၂) မွှေးသောရနံ့တို့ဖြင့်သာ - ထက်လင်းအောင်၊ (၉၃) ထာ၀ရ အထွန်းပြောင်ဆုံးဘောလုံးသမား ဝီလီ - မြတ်သက်၊ (၉၄) မိတ္ထီလာမြို့စားမိဖုရားများနှင့် သီပေါမင်း၏နောက်ဆုံးခရီး - ဦးထွဏ်းလွင်(မိတ္ထီလာ)၊ (၉၅) လက်တွေ့အသုံးချ ဥပဒေပညာ (၂) - ဦးခင်ဇော်(မရမ်းကုန်း)၊ (၉၆) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း - အောင်သင်း၊ (၉၇) စီမံခန့်ခွဲမှု မြှင့်တင်ခြင်း - ကောင်းသာ၊ (၉၈) အများမမြင်တာကို ထိုးထွင်းမြင်ရေး နည်းလမ်းများ - ကောင်းသာ၊ (၉၉) အချိန်စီမံခန့်ခွဲနည်း - ဇေရတု၊ (၁၀၀) သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်းပါးများ - ၂ - ဝင်းချစ်(အမျိုးသား စာပေဆု)၊ (၁၀၁) ချစ်တဲ့သူကို တကယ်ချစ်တဲ့အခါမှာ - အေဇာချို၊ (၁၀၂) ကိုဥက္ကာနှင့် မနှင်းဆီ - ဒေါက်တာသိန်းဆွေ (ဆေး-မန်း)၊ (၁၀၃) ပြည်နှင်ဒဏ်ကြုံခံရ မိသားတစ်စုဘ၀ - ဒီစိုးထွန်း(ကယားပြည်နယ်)၊ (၁၀၄) အလွမ်းမကွေးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီနှင့်အရွယ် အသိအတွေး ကဗျာများ - ခင်မောင်လေး(ချောက်)၊ (၁၀၅) နှင်းဆီတစ်ရာ ကဗျာပွင့်လှေ - မောင်လှဝင်း(မြင်းခြံ)၊ (၁၀၆) My Crush IS A FUJOUSHI - NYA HMWE PANN၊ (၁၀၇) အသက် ၃၀ မတိုင်မီ ဖတ်သင့်သော ကမ္ဘာ့စာအုပ် ၃၀ ဒုတိယတွဲ - အလင်းဆက်၊ (၁၀၈) အမေရိကန်-အီရန် နျူးကလီးယား …. စီးပွားတို့၏အလွန် - နေဇင်လတ်၊ (၁၀၉) ဓမ္မ အမေးအဖြေများပေါင်းချုပ် - ၅ - အရှင်ကေလာသ၊ (၁၁၀) လွတ်လပ်ရေးခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလာမ့်စာပေသမိုင်း - ဒေါက်တာအောင်ဇော်၊ (၁၁၁) မြင့်မိုရ်တောင် ခြေရင်းက… မဂ္ဂဇင်း၀တ္ထုရှည်များ - ကြည်ဇင်နှင်း၊ (၁၁၂) သူရဲကောင်းဘယ်သူလဲ - မဟော်ဂနီ၊ (၁၁၃) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်က … ကျောင်းတော်ကြီးများ - ဦးသိန်းထွန်း၊ (၁၁၄) ပန်းဖြူတစ်ပွင့်နှင့် အခြား၀တ္ထုတိုများ - တင်မိုး၊ (၁၁၅) ကိုယ်ပိုင်ဂီတ ဖွင့်တဲ့နံနက်ခင်း - ဇော်ရဲကျော်၊ (၁၁၆) တိုင်းပြည်ရဲ့ မနက်ဖြန်(အတွေးဆောင်းပါးများ) - ထိန်လင်း၊ (၁၁၇) မောင်ရင်မောင် မမယ်မစာစု … ဖတ်စရာများ - မြင့်ကြိုင်(အောင်မိုးဆောင်း)၊ (၁၁၈) လူငယ်မောင်မယ်တွေကို ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအမွေပေးကြပါ - မောင်ရင့်ကျူး(မြောင်းမြ)၊ (၁၁၉) Straight as anake … short stories - Ko Yoe Kunt၊ (၁၂၀) ရာမည၊ ဧရာ၀တီ ၁၉၈၈-၈၉ - မသီတာ (စမ်းချောင်း)၊ (၁၂၁) ကောင်မလေးရေ … လွမ်းလို့ - ထက်လင်းအောင်၊ (၁၂၂) နတ်မိမယ်နှင့်အခြားပုံပြင်များ -ကိုရင်ကျော်၊ (၁၂၃) မောင်လူအေး မဟုတ်သော မှတ်တမ်းဝင်ဇာတ်လမ်းစဉ်များ - သိပ္ပံမောင်၀၊ (၁၂၄) အဝါရောင်စုဘူးလေး - ဖရော်ဆန်၊ (၁၂၅) မဟာပလ္လင် (ဒုတိယပိုင်း) - သျှင်မ၊ (၁၂၆) ပြန်ကာသာ ရှေ့နောက်တွေး(မိုးမခအမှတ်တရစုစည်းမှု) - မာမာအေး၊ (၁၂၇) စုန်းမတီဗွီ ကဗျာများ - ကန္တာရမိုးစက်၊ (၁၂၈) ကြယ်တွေငိုတဲ့ညနှင့် ဘ၀ခါးခါးကဗျာများ - ကိုရင်ရွှေဗျိုင်း၊ (၁၂၉) ဆဋ္ဌမမြောက်မိဖုရားနှင့်ဘ၀ဒဿနဓမ္မစာစုများ - ငြိမ်းနန္ဒ၊ (၁၃၀) ဤခရီးမနီးပါနှင့်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် ရိုးရာဓလေ့များ - လင်းနေ(နမော)၊ (၁၃၁) မျောက်စိတ်၊ မိကျောင်း ဦးနှောက်နဲ့ .. အခြားစာစုများ - ဒေါက်တာအောင်မျိုး၊ (၁၃၂) ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ - ကိုနေနေ၊ (၁၃၃) အရည်အချင်းနှင့် အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်း - ကောင်းပြည့်သော်၊ (၁၃၄) ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ပဲစေ့တွေ - နေမျိုး၊ (၁၃၅) My mermoties နှင့်အခြားရသဆောင်းပါးများ - ဖြူစင်ဝင်း၊ (၁၃၆) နရသိန် အတွင်းအပြင် ပုံရိပ်များ - ကို၀၊ (၁၃၇) ယောကူငှက် - သူရိန်လူလေး၊ (၁၃၈) ကောင်းကင်ကရွှေပိန်ညင်းရယ် မိုးခေါ်လို့ဆင်း - ဒဂုန်တာရာ၊ (၁၃၉) ဆည်းဆာလေညင်း ကဗျာများ - ဆွေသန်း၊ (၁၄၀) မဟာတို့၏ ကျဆုံးခန်း (သတ္တမတွဲ) - လှစိုးဝေ၊ (၁၄၁) အဆောင်နှင့်အခြား ၀တ္ထုတိုများ - ညိုထွန်းလူ၊ (၁၄၂) ဗုဒ္ဓဝင် ကဗျာများ - တက္ကသိုလ်ဇေယျ၊ (၁၄၃) မျှော်ငေး (၁၉၈၉-၂၀၁၇) - ကိုသျှား၊ (၁၄၄) သွေးချို၊ ဆီးချို - ပါမောက္ခနေဝင်း (ဆေးပညာ)၊ (၁၄၅) မိန်းမတစ်ယောက် - ခင်နှင်းဖွေး၊ (၁၄၆) ဘုရားရှိခိုးပါ ဖွန်ကြောင်ပါ ရိုလာကိုစတာစီးပါ - ဆစ်ခ်၊ (၁၄၇) ကျွန်ကျမ်း - သူဝေး၊ (၁၄၈) တကယ်ချတဲ့ မဲလတိုက်ပွဲနှင့်အခြေခံစစ်၀တ္ထုများ - စစ်သွေးနီ၊ (၁၄၉) မှော်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းပျောက် ရှာပုံတော်ဖွင့်ခန်း - မှော်နတ်ပျို၊ (၁၅၀) ပန်းပွင့်စီးသံ - ဇင်နှင်းသစ်(ရွှေတောင်မြေ)၊ (၁၅၁) မာယာအိန်ဂျယ်လို - The key collection၊ (၁၅၂) ဆိုလာစနစ် - The key collection၊ (၁၅၃) ပုဂံခေတ်ဗိသုကာနှင့် … ပြောင်းလဲလာပုံ - ဗိုလ်မှူးဘရှင်၊ (၁၅၄) ဂရိတ်ဘယ်ရီယာ ရိဖ် - The key collection၊ (၁၅၅) မြင်သိခံစား အာရုံများကို … လျှို့ဝှက်ချက်များ - ကောင်းသာ၊ (၁၅၆) လက်တွေ့အသုံးချ ဗုဒ္ဓဘာသာ - မေတ္တာမိုးဝေ၊ (၁၅၇) အောင်မြင်ရေးသော့ချက် စိတ်ပန်းဖြေ - မင်းစော(တောင်သမန်)၊ (၁၅၈) အောင်မြင်ကြီးပွား ရွှေစကား - ကောင်းပြည့်သော်၊ (၁၅၉) ဘာသာကြီး လေးခု၏ အဆုံးအမများ - စိန်ဌေးဟန်၊ (၁၆၀) ယုန်တောင်ပြေး ခွေးမြောက်လိုက် - ပြေ (ဆေး-၂)၊ (၁၆၁) ဖား တိုင်းပြည်(နိုင်ငံရေးသရော်စာများ) - နောင်ရိုး၊ (၁၆၂) အနာဂတ်ရဲ့ ပန်းကလေးများဆီသို့နှင့် အခြားဆောင်း ပါးများ - ရေချမ်း (မန်း)၊ (၁၆၃) ကျွန်တော့်ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ - ဒေါက်တာမြင့်သန်းထွန်း၊ (၁၆၄) ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး .. သဘောတရားများ - ဆလိုင်းလျန်မှုန်း၊ (၁၆၅) ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ ကဗျာ၀တ္ထုရှည် - အိမ်တင်အေး(ပုလဲ)၊ (၁၆၆) အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ - အောင်ဌေး(ဓူဝံ)၊ (၁၆၇) လူငယ်တွေအတွက် နိုင်ငံရေး အတွေးစကား ၅၇ - အကြီးကိုကို(ကသာ)၊ (၁၆၈) အတွေးချိုချို ဘ၀ချိုချို - နိုက်၊ (၁၆၉) တိုက်ပွဲပျော် စာဆို ကဗျာများ - ကိုချိုစံ၊ (၁၇၀) အသိအလိမ္မာတို့ကို ဉာဏ်မျက်စိနှင့်စာစုံစီ ၂၀၁၈ ခုနှစ် - လင်းပွင့်ဖြူ(ဒဿနိက)၊ (၁၇၁) ကုက္ကိုရိပ်နဲ့ ကံ့ကော်တောကို လွမ်းမိတယ် - သူရထိုက်၊ (၁၇၂) ပျံသန်းခြင်းနှင့် ရွေ့လျားခြင်း(ကဗျာ၀တ္ထုများစုစည်းမှု) - တာရာသိမ်းအောင်၊ (၁၇၃) ကောင်းကင်မေ - နောင်မင်းလွင် (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)၊ (၁၇၄) နှစ်တစ်ရာပြည့်မှတ်တမ်း - လပွတ္တာမြို့၊ (၁၇၅) အပ္ပမာဒ ဓမ္မလက်ဆောင် … ဆောင်းပါးများစုစည်းမှု - မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ၊ (၁၇၆) ဖျတ်ခနဲတွေ့ရသော ရုပ်ပုံလွှာကားချပ်များ - ၅ - ဒဂုန်တာရာ၊ (၁၇၇) တောင်တန်းပြာနှင့်အဘိုးအို - ညိုမင်းဇံသာ၊ (၁၇၈) သင်ဘယ်လမ်းရွေးမလဲနှင့် ဓမ္မရသဆောင်းပါးများ - မုဒုံဦးငွေသန်း(ငြိမ်း)၊ (၁၇၉) ငါ့လက်ဖျံရိုးပေါ်က ကာလယန္တရား - လွမ်းတေးချို၊ (၁၈၀) ဟင်းချက်မစားတဲ့ ရပ်ကွက် - လူရွှင်တော်ဧရာ၊ (၁၈၁) မိုးရိပ်ဇုန် - ထွန်းကြယ်သိုက်၊ (၁၈၂) အိန္ဒိယ၏ အဖိုးတန်လူသားကမ္ဘာ့ရတနာတစ်ပါး ဂျဝါဟလာနေရူး - ရဲနောင်ထွဋ်၊ (၁၈၃) ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း … ၁၉၁၇ ချင်းတော်လှန်ရေးသမိုင်း - ဆလိုင်းဗန်ကျုံးလျန်(ယူကေ)၊ (၁၈၄) နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ရွာကလေးရယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်း၀တ္ထုတိုများ - ကျွန်းစဉ်မြေစောခက်၊ (၁၈၅) မီးနဲ့ဆေးတဲ့ ရေတံခွန် - ဝင်းမြင့်၊ (၁၈၆) အချိန်မီ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ - ကြည်ရွှန်း၊ (၁၈၇) ရှောရှန့်က မိန်းမလှ - လင်းတင်သီဟ၊ (၁၈၈) ၆၄ လမ်းစဉ် ကဗျာရှည် ၅ ပုဒ် - မောင်ခိုင်အောင်၊ (၁၈၉) သို့---သတိရခြင်းများစွာဖြင့် - မြေမာန်မိုး၊ (၁၉၀) မျက်မှောက်ခေတ်နိုင်ငံတကာ၀တ္ထုတိုများ - ၁ - မောင်ဒေး၊ (၁၉၁) ပြောမိတော့မှပဲ- ၄ … အခြားဆောင်းပါးများ - ကောင်းဆက်နိုင်၊ (၁၉၂) အေးချမ်းပါစေ အမိမြေ - နေထက်ထက်အောင်၊ (၁၉၃) လူငယ်တွေအတွက် အောင်မြင်မှုအတွေးစကား - ၆၆ - အကြီးကိုကို(ကသာ)၊ (၁၉၄) လွင့် - ဆွေရည်လင်း၊ (၁၉၅) သက်တံ့တွေရဲ့ အဆုံးမှာ … - ကိုသီကိုဟ၊ (၁၉၆) နွေဦးမှာ ကျက်သရေ ကျန်ခဲ့တယ် - မောင်ဥယျာဉ်၊ (၁၉၇) အတွေးနောက်က အရေး - ၂ - မြင့်သန်း၊ (၁၉၈) ခက်ရာခဲခြစ် စကားပြေ - သားဦး၊ (၁၉၉) အဖြူရောင်ရေစီးနှင့် ဝန်းကျင်ကဗျာများ - အောင်ရာဇာ၊ (၂၀၀) အစ္စရေး ဉာဏ်ကြီးရှင်များ ဆန်းသစ်တီထွင် ကမ္ဘာကို ပြုပြင် - ဟိန်းလတ်၊ (၂၀၁) ပန်းခရေ ၀တ္ထုတိုများ - ငြိမ်းအောင်(ဖက်ပင်အိုင်)၊ (၂၀၂) လူကြီးတွေက စပြင်ပါ လူငယ်ခံစားမှု အတွေးစာစုများ - ကိုကိုလင်း(အမေ့အိမ်)၊ (၂၀၃) ရန်သူတောင်ကုန်းမှာ အလံစိုက်နိုင်ပါစေ - ဝင်းဇော်လတ်၊ (၂၀၄) မိုးကုတ်အမွေအမှု--အခြားအမှီး၀တ္ထုများ - ရွှေဥဒေါင်း၊ (၂၀၅) အနောက်မြောက်မြို့တော် မုံရွာမှသည် ရနောင်းဆီသို့ - သိုသော်(ရွှေမှော်မြေ)၊ (၂၀၆) သားကိုအသက်ပေး၍ ချစ်သောမိခင် .. ရသစာစုများ - နန်းအောင်လှိုင်(လှိုင်)၊ (၂၀၇) အမှတ်တရလက်ဆောင် - စူဇန်၊ (၂၀၈) ကြုံရဆုံရပုဏ္ဏက ဘီလူးနှင့်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ - မြနန်းရှင်၊ (၂၀၉) ယမကာလုလင် - မောင်သော်က၊ (၂၁၀) အတိုဆုံးကဗျာများ - တေဇာ(လရောင်လမ်း)၊ (၂၁၁) သမီးလေးယူဖို့အမွေ - ဟန်ညွန့်ဟန်(သာပေါင်း)၊ (၂၁၂) နေ့စဉ် သတိနှင့်နေထိုင်ခြင်း … နည်းလမ်း ၃၆၅ သွယ် - ခင်စောတင့်၊ (၂၁၃) အိပ်မက်ကောင်းကင် - မောင်နီနု(ရေဦး)၊ (၂၁၄) ကိုယ်ရောင်လင်း အောင်ခြင်းမင်္ဂလာ - ဒီပံလင်း၊ (၂၁၅) လည်ပြန်အတွေး စာစုများ - အော်ကျူး၊ (၂၁၆) ဂမ္ဘီရလက်ဆောင် - လင်းရောင်တင်၊ (၂၁၇) ချစ်ရခင်ရလေးစားရသူများအကြောင်း အမှတ်တရ ရုပ်ပုံလွှာ - ညွန့်သစ်၊ (၂၁၈) ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆိုင်ရာ စာတမ်းနှစ်စောင် - မောင်ပြည့်မင်း၊ (၂၁၉) ပရက်ရှပ်စ်မန်မို - ချိုပိန်းနောင်၊ (၂၂၀) လိပ်ပြာလမ်း ရသစာတမ်းစုစည်းမှု - မြေလတ်မောင်မြင့်သူ၊ (၂၂၁) မြတ်နိုးထိန်းသိမ်းဖွယ်ရာ မြန်မာကဗျာ ဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ် - မောင်စိမ်းနောင်(လယ်ဝေး)၊ (၂၂၂) REACTIVE GRAVITATIONAL FORCE THEOTY - DR.SAN YU KO၊ (၂၂၃) မိဘကျေးဇူးဆပ်နည်း ၁၀၀ - မောင်လှကြိုင်(ချောင်းဆုံ)၊ (၂၂၄) ရောက်တတ်ရာရာ စာစုများ … အတွဲ (၃) - အမ်ပီမောင်မြင့်၊ (၂၂၅) လှိုင်းကြည်​ဖြူရဲ့ ပင်လယ် - စိုးဘားဒိုင်၊ (၂၂၆) လေးမြိုင် စာပေသတ္တိဖြင့် ရှင်သန်သူ - မသန်းသန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)၊ (၂၂၇) အလယ်ရွာကလူနှင့် အတွေးစာစုများ - တင်အောင်စန်း(မော်လမြိုင်)၊ (၂၂၈) ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံ ၈၈၈၈ နှစ်(၃၀)ပြည့် - ဦးသက်ဦး၊ (၂၂၉) ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် (၂) - ကပ္ပတိန်သာစိန်